Sababta aan weli u furi karin waxyaabaha go'an DBF faylka? - DataNumen
Maxaa Xogta Qaarkeed Loo Soo Celin Waayey?
Waxaa jira seddex fursadood oo xaaladan ah, sida soo socota:
Your DBF Faylka waxaa abuuray hal codsi, laakiin waxaad dooneysaa inaad furto feylka go'an ee codsi kale, kaasoo aan gebi ahaanba la jaan qaadi karin kii hore oo sababaya dhibaatooyin. Xalku waa in lagu dejiyo nooca saxda ah sanduuqa combo ee ag yaal “Xul DBF in la dayactiro ”sanduuqa waxka bedelka sida ku cad arjiga labaad ka dibna starhagaajinta feylka markale. Tusaale ahaan, kanaga DBF Faylka waxaa abuuray Clipper laakiin waxaad dooneysaa inaad ka furto dBase III, markaa waxaad u baahan tahay inaad dejiso "Version" illaa "dBase III" ka dibna aad dib u hagaajiso feylka markale.
Adiga ayaa go'an DBF feylku wuu ka weyn yahay 2GB, xaddiga cabbirka lagu yaqaan ee ah DBF faylasha, sidaas most DBF codsiyada ku habboon ma furi karaan faylkaaga. Tusaale ahaan, markaad isticmaaleyso Visual FoxPro si aad u furto feyl noocan oo kale ah, waxaad heli doontaa qalad "Ma ahan miis". Xalku waa in la suuro galiyo "Faylasha la kala qaado markay ka weyn tahay ### MB" xulashada ku jirta tabka "Options" isla markaana la dejiyo qiime ku habboon, oo ka yaraaneysa 2GB, tusaale ahaan, 1800MB, oo ah cabirka ugu badan ee faylka, iyo ka dib hagaaji asalkaaga DBF markale faylka Marka wax soo saarka faylka go'an ka weyn yahay xadkaan, DDBFR wuxuu abuuri doonaa feyl cusub oo kala qeybsan si uu u xajiyo xogta harsan ee soo hartay. Iyo haddii feylka kala-baxa uu mar kale gaaro xadka, feyl labaad oo cusub ayaa la abuuri doonaa, iyo wixii la mid ah.
In aad go'an DBF faylka, waxaa miiska ku jira in ka badan 255 goobood. Hadda most DBF codsiyada la jaan qaada ma taageeraan miis leh wax ka badan 255 goobood. Tusaale ahaan, markaad isticmaaleyso Visual FoxPro si aad u furto feyl noocan oo kale ah, waxaad heli doontaa qalad "Ma ahan miis". Xalku waa in la suuro galiyo “Split table marka ay jiraan wax ka badan ### beeraha” ikhtiyaarka ku yaal tabta “Options” oo aad dejiso qiime ku habboon, tusaale ahaan, 255, oo ah tirada ugu badan ee garoonka, ka dibna dayactir asalkaaga DBF markale faylka Sidaas markay DDBFR wuxuu ogaadaa inay miiska kujiraan in kabadan 255 goobood, wuxuu abuuri doonaa miis cusub oo looqeybiyo si loowaafajiyo meelaha harsan. Oo hadday meelaha haray weli ka badan yihiin 255 beero, miis labaad oo cusub oo loo qaybiyo ayaa la abuuri doonaa, iyo wixii la mid ah.
ma furi karo, fayl go'an
La daabacay May 17, 2021